Induction indha-indheynta aluminium ayaa aad ugu soo badanaya dhanka warshadaha. Tusaalaha caadiga ah waa xarig-tuurka tuubooyin kala duwan oo loogu talagalay jirka kuleylka gawaarida. The kululaynta kuleylka induction si ballaadhan loogu adeegsado hawsha noocan ahi waa mid aan ku wareegsanayn, taas oo lagu tilmaami karo qaabka "Horseshoe-hairpin". Wareegyadan, aagga magnetka iyo qaybinta hadda jirta ayaa si dabiici ah 3-D dabiici ah. Barnaamijyadan, waxaa ka jira dhibaatooyin xagga tayada wadajirka ah iyo joogtaynta natiijooyinka qayb ilaa qayb. Si loo xaliyo mid ka mid ah dhibaatooyinka noocan oo kale ah soo saaraha weyn ee baabuurta, barnaamijka jilitaanka kumbuyuutarka ee Flux3D ayaa loo isticmaalay daraasadda nidaamka iyo hagaajinta. Wax-u-hagaajinta waxaa ka mid ah beddelidda isku-xidhka soo-saarka iyo qaabeynta xakamaynta qulqulka magnetic. Qalabka cusub ee soo-saarista, oo si tijaabo ah loogu xaqiijiyey shaybaarka, waxay soo saaraan qaybo leh isku-xirnaan tayo sare leh dhowr goobood oo wax soo saar ah.
Baabuur kastaa wuxuu ubaahanyahay kala badalayaal kaladuwan oo kaladuwan (diirimaha kululeeyaha, uumiyaha, hawo-qaateyaasha, hiitarka, iwm.) Qaboojinta tareenka, qaboojiyaha, qaboojinta saliida, iwm. Inta badan gawaarida kuleylka ee gawaarida rakaabka maanta waxay ka samaysan yihiin aluminium ama aluminium. Xitaa haddii mashiin isku mid ah loo isticmaalo dhowr nooc oo gawaari ah, iskuxirku wuu kala duwanaan karaa iyadoo ay ugu wacan tahay qaabab kala duwan oo ka hooseeya daboolka. Sababtaas awgeed, waa dhaqan caadi u ah soosaarayaasha qaybaha inay sameeyaan dhowr meyd oo aasaasi ah kuleylka ka dibna ku dhejiya isku xirayaasha kala duwan hawlgalka labaad.
Hay'adaha isweydaarsiga kuleylka badanaa waxay ka kooban yihiin baalal aluminium ah, tuubooyin iyo madaxyo isku wada laalaada foornada. Ka dib brazing, kuleyliyeyaasha kuleylka ayaa loo habeeyay moodeelka gaariga ee la siiyay iyadoo lagu dhejinayo haanta naylka ama tuubbooyinka aluminium ee ugu badan ee kala duwan oo leh xirmo isku xir ah. Tuubooyinkan waxay kuxiranyihiin MIG alxanka, ololka ama indha indheynta indha indheynta. Xaaladda kala-bixidda, xakamaynta heer-kulka saxda ah ayaa loo baahan yahay farqiga yar ee u dhexeeya dhalaalka iyo heerkulka kuleylka ee aluminium (20-50 C waxay kuxirantahay isku-darka, biraha buuxiya iyo jawiga), kuleylka kuleylka sare ee aluminium iyo masaafada gaaban ee kale kala-goysyada brazed hawlgal hore.
Kuleylka induction waa hab caan ah oo lagu xirayo tuubooyin kala duwan si loogu kululeeyo madaxyada sariflayaasha. Jaantus 1 waa sawirka an brazing induction set-up loogu xirayo tuubbo tuubbo madaxa ku-beddelaha kuleylka. Shuruudaha kuleylka saxda ah awgood, wejiga cirbadda soo-goyntu waa inuu ku dhawaadaa isku-xidhka si loo xoqdo. Sidaa darteed looma isticmaali karo garbasaarid dhululubo oo fudud, maxaa yeelay qaybta lama saari karo ka dib marka isku-xirku xirmo.
Waxaa jira laba nooc oo qaab-dhismeedka isku-xidhka soo-saarista ee loo adeegsado brazing kala-goysyadan: "clamshell" iyo "Horseo-hairpin" inductors inductors. Index-bixiyeyaasha "Clamshell" waxay la mid yihiin inductors induction cylindrical, laakiin waxay u furan yihiin inay oggolaadaan in qayb laga saaro. Indho-indheeyeyaasha "Horseshoe-hairpin" inductors waxay u eg yihiin fardo fardo lagu rakibo qaybta waxayna muhiimad ahaan yihiin laba barkin timo oo ku yaal dhinacyada ka soo horjeeda isku-xidhka.
Faa'iidada isticmaalka aaladda loo yaqaan "Clamshell" inductor waa in kululaynta ay ka siman tahay wareegga oo ay sahal tahay in la saadaaliyo. Faa'iido darrada soo saaraha "Clamshell" ayaa ah in nidaamka farsamada loo baahan yahay uu ka sii dhib badan yahay isla markaana xiriirrada sare ee hadda jira ay yihiin kuwo aan la isku halleyn karin.
Indho-indheeyeyaasha "Horseshoe-hairpin" waxay soosaaraan qaabab kulul oo 3-D ah marka loo eego "Clamshells". Faa'iidada aaladda "Horseshoe-hairpin" inductor waa in maaraynta qaybta la fududeeyo.
Jilitaanka kumbuyuutarku wuxuu hagaajiyaa indha sarcaadka
Soo saaraha weyn ee kuleyliyaha-ku-beddelka ayaa lahaa dhibaatooyin tayo leh oo ku saabsan xiritaanka wadajirka ka muuqda Jaantuska 1 iyadoo la adeegsanayo qalabka loo yaqaan 'Horsee-hairpin inductor inductor'. Wadajirka faashadku wuxuu u fiicnaa inta badan qaybaha, laakiin kuleylintu gabi ahaanba way ka duwanaan lahayd qaybo ka mid ah, taas oo keenaysa qoto dheer wadajirka oo aan ku filnayn, kala-goysyada qabow iyo biraha wax lagu buuxiyo ee kor u qaadaya gidaarka tuubada kuleylka deegaanka awgeed. Xitaa iyada oo la tijaabinayo kuleyliye kasta oo kuleyliyaha ah si ay u daadiyaan, qaybo ka mid ah wali waxay ku sii daadan yihiin wadajirkan adeegga. Center for Induction Technology Inc. waxaa qandaraas lagu siiyay falanqaynta iyo xallinta dhibaatada.
Awoodda korontada loo isticmaalo ee shaqadu waxay leedahay isbeddello isdaba-joog ah oo 10 ilaa 25 kHz ah iyo awood lagu qiimeeyay 60 kW. Hawsha kala-qaadista, hawl wade ayaa ku dhejinaya giraanta biraha guntin dhammaadka tuubbada oo wuxuu gelinayaa tuubbada gudaha tuubbada. Kuleyliyaha kuleylka waxaa la dhigayaa riig qaas ah waxaana loo dhaqaajiyaa gudaha inductor fardaha.
Dhamaan aagagga gawaarida waa la shubay. Joogtada loo isticmaalo in lagu diiriyo qaybta sida caadiga ah waa 12 illaa 15 kHz, waqtiga kuleylkuna waa qiyaastii 20 ilbidhiqsi. Heerka awoodda waxaa lagu qorsheeyay dhimista qadka toosan dhamaadka wareegga kululaynta. Halbeegga indhaha wuxuu damiyaa korontada markii heerkulka dhinaca dambe ee wadajirka uu gaaro qiime hore.
Waxaa jira arrimo badan oo sababi kara iswaafaq la'aanta soo-saaraha uu la kulmayay, sida kala duwanaanta qaybaha wadajirka ah (cabirka iyo booska) iyo xasillooni la'aan iyo is bedbeddelka (waqtiga) xiriirka korantada iyo kuleylka ee u dhexeeya tuubada, tuubada, giraanta buuxiyaha, iwm. waa asal ahaan mid aan degganeyn, iyo kala duwanaanshaha yar ee arrimahan ayaa sababi kara dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo firfircoon. Tusaale ahaan, giraanta biraha furitaanka ee furan waxay qayb ahaan kalabixin kartaa xoogagga elektromagnetic-ka, dhammaadka bilaashka ee giraantana dib ayey u nuugi karaan xoogagga kala-soocyada ama lama sii daayo Cunsurrada sawaxanka way adag tahay in la yareeyo ama laga takhaluso, xalka dhibaatada ayaa loo baahan yahay in la kordhiyo xoogga wadarta guud. Jilidda kumbuyuutarka waa qalab wax ku ool ah oo lagu falanqeeyo laguna hagaajiyo habka.
Intii lagu guda jiray qiimaynta habka indha sarcaadinta, xoogagga korontada ku shaqeeya ayaa la arkay. Xilligan la joogo awoodda la daarayo, cirifka fardo-fuulaha wuxuu si cad u dareemayaa ballaarin sababtuna tahay codsi lama filaan ah oo ku saabsan xoogga koronto-ku-shaqeysiga. Sidaa darteed, soo-saaraha waxaa loo sameeyay si farsamo ahaan xoog badan, oo ay ku jiraan ku darida saxan dhejis ah oo dheeri ah (G10) oo isku xira xididdada laba gariiradda timaha. Banaanbaxa kale ee xoogagga korontada ku shaqeeya wuxuu ahaa wareejinta birta la shubay oo ka durugsan meelaha u dhow naxaasta marka meertada birlabku ka xoog badan tahay. Nidaam caadi ah, biraha wax lagu buuxiyo ayaa si isku mid ah ugu qaybiya agagaarka wadajirka sababtoo ah xoogagga kala-soocida iyo culeyska culeyska taas oo ka soo horjeedda geeddi-socod aan caadi ahayn oo biraha wax lagu buuxiyo ay ka soo bixi karaan wadajirka ama ay kor ugu sii socdaan dusha sare ee tubbada.
Maxaa yeelay, aluminium induction indha indheyn waa geedi socod aad u dhib badan, macquul maahan in lafilo jilitaanka saxda ah ee silsiladda oo dhan ee ifafaalaha wadajirka ah (elektromagnetic, kuleylka, farsamada, hydrodynamic iyo biraha). Nidaamka ugu muhiimsan uguna xakamaynta badan waa jiilka ilaha elektromagnetic elektaroonigga ah, kuwaas oo lagu lafa guray barnaamijka Flux 3D. Sababtoo ah dabeecadda adag ee habka indha indheynta indha indheynta, iskudhafka jilitaanka kumbuyuutarka iyo tijaabooyinka ayaa loo isticmaalay qaabeynta iyo hagaajinta.
Induction_Aluminium_Bracing with Computer_Assisted
Categories Technologies Tags aluminium brazer, braids aluminium, aluminium geedi socodka, aluminium indha indheynta, aluminium kuleyliyaha kuleylka kuleylka, iibso brazer aluminium, iibso brazer induction brazer, aluminium soo noqnoqda, Induction Aluminium Brazing, Induction aluminium brazing codsiga, Qalabka aluminium ee induction, kuleyliyaha aluminiinka induction Post navigation